Madaxweynaha JFS oo Addis-Ababa uga qeyb galaya shir aan caadi ahayn oo looga hadlayo xaaladda amni ee Koonfurta Suudan. – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 21-ka bishan Magaaladda Addis-Ababa kaga qeybgalaya shir aan caadi ahayn oo madaxda waddamada IGAD ay isugu imaanayaan.
Hoggaanka IGAD ayaa soo gaarsiiyey Madaxweynaha casuumaaddii shirka, waxaana la filayaa in wafdi uu hoggaaminayo ay gaaraan Addis-ababa 21 bisha.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Diblomaasiyiin Soomaaliyeed u saartay Sidii ay ugala qeyb qaadan lahaayeen Diblomaasiyiinta kale ee ka socda Gobolka Geeska Afrika xal u raadinta dhibaatooyinka ka taagan Koonfurta Suudaan.
Diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa u howl-galaya inay xog u ruurin ku sameeyaan duruufaha ka jirta Koonfurta Suudaan, islamarkaana iyagoo la wadaagaya xogtaas dhiggooda Dalalka kale ee IGAD.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Oslo Kula Kulmay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay.”Sawirro”